Chrome 80 inouya nemagadzirirwo mazhinji ekuchengetedza uye dzimwe nhau | Linux Vakapindwa muropa
Chrome 80 inouya nemagadzirirwo mazhinji ekuchengetedza uye idzi dzimwe nhau
Google yakaburitsa vhezheni itsva yewebhusaiti. Ndezve Chrome 80 (kunyanya 80.0.3987.87) uye inouya nedzimwe nhau dzinonakidza dzatichanyora pazasi. Asi, dai isu taizoteerera chete kune izvo zvakaburitswa pane yekutanga webhusaiti, isu taizofunga kuti iri vhezheni yasvika kugadzirisa kukanganisa kwekuchengetedza, nekuti ndicho chete chinhu chavanotaura pano. Pakazara, kusagadzikana kwakagadziriswa mune iyi vhezheni makumi mashanu nenhanhatu, kanokwana gumi acho akawanikwa ne "vekunze vatsvagiri" uye akakosha zvakanyanya.
Nezve shanduko, Google atumira yekupinda pawebhusaiti yavo, asi imwe yeaya madiki akarongeka izvo zvisiri nyore uye zvakasununguka kuverenga. Ivo vakaburitsa yakajeka data pavakaburitsa yazvino Chrome 80 beta, uye pazasi une runyorwa rwe nhau dzakatanhamara ayo asvika pamwe neshanduro yakasvika panzvimbo yavo yepamutemo vasati vazivisa kuvhurwa kwayo.
Chrome 80 inosimbisa
Shandisa zvishoma zvigadzirwa kuvonga kunotonhora eyelashes. Iyi sisitimu nyowani inotonhora kana kubatisisa chero tabu ratisina kubvunza mushure memaminitsi mashanu, zvinozoita kuti idye zviwanikwa zvishoma, pakati pazvo tine CPU, RAM nebhatiri. Izvo hazvizoshandise pamapeji akaita seSpotify. Izvo zvitsva zvasvikawo kune nharembozha.
Tab mapoka. Chinhu chitsva chinotanga kusvika muChannel 80, asi vamwe vashandisi vanofanirwa kumirira v81 yebrowser. Ichi chitsva chichatibvumidza isu kuronga matabhu nezita nemuvara.
Zvishoma zvisinganzwisisike ziviso. Sei Firefox, iyo Notices iyo peji inoda kutitumira isu zviziviso, yakakosha iyo redundancy, ichave isinganyanye kunetsa kubva kune iyi vhezheni. Ehezve, iyo vhezheni yeCh Chrome haishande senge iyo Mozilla browser; Izvo zvinongoshanda chete kana mushandisi akaramba zviyeuchidzo kazhinji kana pamapeji asingasimbirire zvakanyanya.
Kuchengetedzwa kwekuvandudza mumakuki.
Manejimendi yeSVG-yakavakirwa favicons.
Basa riri kuenderera pakubvisa FTP. Muchokwadi, iyi vhezheni yakadonhedza zvachose rutsigiro.
Tsigiro yeWebVR 1.1.
Google Chrome 80 Inowanikwa kubva nezuro, Kukadzi 4. Mune mazhinji maLinux-based operating system, kana uchiisa iyo browser inowedzerawo repamutemo, saka kugadzirisa kuri nyore sekuisa mapakeji anowanikwa mune yedu yekuvandudza system. Zvekuisa nyowani, iyo nyowani vhezheni inowanikwa kubva kune yako website yepamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chrome 80 inouya nemagadzirirwo mazhinji ekuchengetedza uye idzi dzimwe nhau